ဘီတာ စင်တောရိ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 14h 03m 49.4s, −60° 22′ 23″
ဘီ စင်တောရိ နှင့် မရောထွေးပါနှင့်။
ဘီတာ စင်တောရိ တည်နေရာ (စက်ဝိုင်း)
14° 03′ 49.40535″
–60° 22′ 22.9266″
ပင်မ β Cen A1
အဖော် β Cen A2
ပတ်လမ်းကြာချိန် (P) 356.94 days
ဆီမီး-မေဂျာ ဝင်ရိုး (a) 0.0253"
စက်ဝိုင်းပုံပတ်လမ်း (e) 0.825
နိမ့်ဆင်းမှု (i) 67.4°
အနီးဆုံးပတ်လမ်း (T) 2451600.08
ပင်မ β Cen A
အဖော် β Cen B
ပတ်လမ်းကြာချိန် (P) 288.267 နှစ်
ဆီမီး-မေဂျာ ဝင်ရိုး (a) 0.870"
တောက်ပမှု 41,700 L☉
စတီလာ သက်တမ်း 14.1 ± 0.6 Myr
ဒြပ်ထု 10.7 ± 0.1 M☉
မျက်နှာပြင် ဒြပ်ဆွဲအား(log g) 3.5 ± 0.4 cgs
သက်ရောက်သည့် အပူချိန် 25,000 ± 2,000 K
ဒြပ်ထု 10.3 ± 0.1 M☉
ဒြပ်ထု 4.61 M☉
ဘီတာ စင်တောရိ (β Centauri) သည် စင်တောရပ် ကြယ်စုတန်းမှ ကြယ်သုံးလုံးစနစ်ဖြစ်သည်။ ယင်းကြယ်သုံးစင်း၏ ပေါင်းစပ်သောအလင်းသည် အလင်းပြကိန်း ၀.၆၁ ဖြစ်ကာ စင်တောရပ် ကြယ်စုတန်းတွင် ဒုတိယအတောက်ပဆုံး၊ ညဘက်ကောင်းကင်တွင် ၁ဝ ခုမြောက် အတောက်ပဆုံးကြယ်အဖြစ် နေရာယူထားသည်။ ယင်းကြယ်စနစ်သို့ ရောက်ရှိရန် အလင်းနှစ် ၄၀၀ (၁၂၀ parsec) ကြာမြင့်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ van Leeuwen၊ F. (November 2007)၊ "Validation of the new Hipparcos reduction"၊ Astronomy and Astrophysics၊ 474 (2): 653–664၊ arXiv:0708.1752၊ Bibcode:2007A&A...474..653V၊ doi:10.1051/0004-6361:20078357
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ "The Bright star catalogue" (1991). New Haven, Conn.: Yale University Observatory, 5th rev.ed.. Bibcode: 1991bsc..book.....H.
↑ ၃.၀၀ ၃.၀၁ ၃.၀၂ ၃.၀၃ ၃.၀၄ ၃.၀၅ ၃.၀၆ ၃.၀၇ ၃.၀၈ ၃.၀၉ ၃.၁၀ Ausseloos၊ M.; et al. (August 2006)၊ "High-precision elements of double-lined spectroscopic binaries from combined interferometry and spectroscopy. Application to the β Cephei star β Centauri"၊ Astronomy and Astrophysics၊ 455 (1): 259–269၊ arXiv:astro-ph/0605220၊ Bibcode:2006A&A...455..259A၊ doi:10.1051/0004-6361:20064829
↑ ၄.၀ ၄.၁ "Beta Centauri: An eccentric binary with two beta Cep-type components" (2002). Astronomy and Astrophysics 384: 209. doi:10.1051/0004-6361:20020004. Bibcode: 2002A&A...384..209A.
↑ ၅.၀ ၅.၁ "VizieR Online Data Catalog: Multiple star catalogue (MSC) (Tokovinin 1997-1999)" (1999). VizieR On-line Data Catalog: J/A+AS/124/75. Originally published in: 1997A&AS..124...75T 412: 40075. Bibcode: 1999yCat..41240075T.
↑ Raassen၊ A. J. J.; et al. (July 2006)၊ "XMM-Newton observations of β Centauri (B1 III): The temperature structure in the hot plasma and the photosphere-wind connection"၊ Astronomy and Astrophysics၊ 437 (2): 599–609၊ Bibcode:2005A&A...437..599R၊ doi:10.1051/0004-6361:20052650
↑ Allen၊ R. H. (1963)၊ Star Names: Their Lore and Meaning (Reprint ed.)၊ New York: Dover Publications Inc၊ p. 154၊ ISBN 0-486-21079-0၊ 2010-12-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
↑ "V* bet Cen -- Variable Star of beta Cep type"၊ SIMBAD၊ Centre de Données astronomiques de Strasbourg၊ 2011-12-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘီတာ_စင်တောရိ&oldid=721425" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။